Markabkii Gaadiidka Dagaalka keenay Muqdisho oo u jiheystay Yemen & Xuutiyiinta oo u hanjabtay Turkiga. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Markabkii Gaadiidka Dagaalka keenay Muqdisho oo u jiheystay Yemen & Xuutiyiinta oo...
Markabkii Gaadiidka Dagaalka keenay Muqdisho oo u jiheystay Yemen & Xuutiyiinta oo u hanjabtay Turkiga.
Xubin ka tirsan Golaha Sare ee Siyaasadda ee Kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa uga digay Turkiga faragelin kasta oo ka dhanka ah Yemen.
C/Wahaab Al-Mahbashi ayaa digniintaasi jeediyey, xilli uu la hadlayey Wakaalladda Wararka Iran ee IRNA, wuxuuna xusay inay Turkiga la kulmi doonaan cawaaqib-xumoka daran Weerarkii Isbahaysiga Sacuudiga ku qaadeen Yemen tan iyo sanadkii 2015-kii.
Waxa uu tilmamay haddii ay Ciiddanka Turkiga soo galaan Yemen inay la kulmi doonaan khasaare ka daran kuwii gardarada ugu horeeyey ee Yemen faragelinta ku sameeyey.
“Haddii ay Turkiga soo galaan goobaha dagaalka ee Yemen” ayuu yiri C/Wahaab Al-Mahbashi,oo intaasi ku daray inay taasi Calaamad u noqon karto inaan Turkiga lagu maamulin Caqli iyo Miyir, waa sida uu hadalka u dhigay.
Sarkaalkaasi ka tirsan Golaha Sare ee Siyaasadda ee Kooxda Xuutiyiinta Yemen waxa uu Wareysigiisa ku soo gebgebeeyey inay Saraakiisha Turkiga la dhibaataysan yihiin Caqli-Yar iyo Aragti gaaban, waa sida uu ku sheegay Wareysiga Khaaska ee uu siiyey Wakaalladda Wararka Iran ee IRNA.
Al-Mahbashi waxa kale oo uu tilmaamay inuusan rumeysnayn inuu Madaxweyne Rajab Dayib Erdogan ku halagi doonin Yemen, balse uu bedelkooda adeegsan doono Calooshood-u-shqeystayaal la mid ah kuwii uu u adeegsday Faragelintii Libiya iyo Colaadii Gobalka Nagorno Karabakh ee u dhexeysay Milliteriga dalalka Azerbaijian iyo Armenia.
“Qabsashada Yemen dhamaad farxadeed uma noqon doonto Erdogan naf ahaantiisa, Dowladiisa iyo Ciiddankiisa” ayuu yiri C/Wahaab Al-Mahbashi oo ka tirsan Golaha Sare ee Siyaasadda ee Kooxda Xuutiyiinta Iran ee ay Dowladda Iran taageerto.
Hadalkiisa ayaa ku soo beegmay iyadoo ay soo baxayaan Warbixin sheegayso in qeybo ka mid ah Gaadiidkii Milliteri iyo Qalabkii uu Turkiga dhawaan u wareejiyey Dekedo ku yaalla Somalia loo sii raray Dekedda dabiiciga ee magaalladda Qana ee Gobalka Shabwa ee K/bari ee dalka Yemen.
Waxaa la rumeysan yahay in Shixnadaasi hubka loogu yaboohay Maleeshiyada ISLAAX ee u dagaalanta Dowladda Yemen ee ay Caalamka aqoonsan yihiin.
Wargeyska Al-Akhbaar ee ka soo baxa dalka Lubnaan waxa uu isbuucii hore qoray in Doorka Turkiga ee Yemen ay soo korodhay, kadib, markii uu soo hagagy Xiriirada u dhexeeya Turkiga iyo Sacuudiga.
Calooshood-u-shaqeystayaal Syrian ayaa la sheegay in loo daabulay Yemen, siay u difaacaan magaallada Ma’rib oo ah magaalladii ugu dambaysay ee ay ku xoogganayeen Ciiddanka ay Isbahaysiga Sacuudiga taageeraan ee ka dagaalama Waqooyiga dalka
Previous articleAwood maroorsiga iyo Gabidhacleynta Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullahi Farmajo waa burburka Soomaaliya
Next articleAkhriso: 14 Qodob oo si caksi ah uu uga tanaasulay Farmaajo
Muddooyinkan waxaa taagneyd hadal-heyn ku saabsan labo qoys oo ku muransanaa nin ku lumay dagaalkii 1977-dii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya, laakiin waxaa arrintaas...
Madaxweyne Ahmed Madoobe maxoow ki tilmaamay Farmaajo
Dowladda Waqtigeeda dhamaaday oo sheegtay, in aysan waxba ka beddeli doonin...